Xisbiga hen ee aroosadda: fikradaha. Ciyaaraha xisbiga hen. Dhinaca xafladaha qosolka ee arooska. Sawirro
Xisbiga hen ayaa ah qadiimiga qadiimiga ah, oo ay qabtaan aroosadda saaxiibadeeda arooska arooska. Sida caadiga ah, dhacdadan oo kale waxay ahayd mid aad u murugo badan, sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in gabadha yar ee mustaqbalka gabadhu ay qasab tahay inay "qayliyaan". Ujeedadaas, xitaa si gaar ah loogu martiqaaday "karbaashka" - haweeney ka shaqaysay heeso murugo leh, taas oo keenaysa aroosadda aroosadda ee ilmada iyo cirridka. Sidaa darteed, gabadhu waxay ku nuuxnuuxsatay nolosheeda gabadha ka hor intaanay noqon haweeney guursaday.
Biyaha aroosyada casriga ah ee dharka waa habdhaqanka madadaalada iyo madadaalada, oo ay si gaar ah ugu hawlan yihiin shirkadda haweenka (aroosadda iyo aroosaddu waxay inta badan ku nastaa xafladaha bachelorka ). Habka xisbigu wuxuu ku lug leeyahay dhamaan noocyada cayaaraha, tartamadaha iyo dhacdooyinka lama filaan ah - sida iyaga oo aan lahayn? Waxay noqon kartaa qaybta mawaadiicda leh qoraallo horay loo qoray oo kuu ogolaanaya inaad maskaxdid fikradaha ugu wanaagsan iyo riyooyinka. Fasax noocan oo kale ah ayaa la xusuusan doonaa muddo dheer by aroosadda iyo martideeda!
Fikradaha xisbiyada bachelorette
Sidaas, sidee loo sameeyaa xaflad gabadh dhab ah oo cajiib ah oo aan la ilaawi karin? Waxaan dooranaynaa fikradda asalka ah, waxaan ku darsannaa hal-abuurka iyo dareenka wanaagsan ee la bixiyo!
Si aad u sameysatid xaflad sagaalaad ka mid ah, waa inaad marka hore diyaariso suurtogalnimada ku habboon - ku rid dabool quruxsan sariirta, ku kala firdhin "barkimooyinka" ee "farshaxanka farshaxanka", oo ku faafi rooga jilicsan ee cirifka dhulka. Raaxada qolka loogu talagalay xisbiyada jilicsan ayaa ku dari doona habeenkii hore iyo nalalka. Sida loo daaweeyo martida? Maalmaha fasaxa sida fudud fudud, khudaarta cagaaran, khudradda, khamriga iyo cocktails ayaa habboon. Aroosadda iyo asxaabteeda waxay ku yaallaan baalasha quruxda badan iyo habeenkii habeenkii (xafladaha habeenkii!) Waxeeyna ku raaxaystaan ​​sheekooyinka qarsoodiga ah, xusuusta qadada, daawashada fiidiyowyada iyo sawirada.
Sawirka sawirka - fikradaha asaasiga ah ee xisbiyada bachelorette ee qaabka "xisbi jilicsan":
Xisbiyada bachelorette "dharka qubeyska"
Qof kastaa wuu ogyahay waxyeellada waxtarka leh ee ku saabsan jirka ee saunada ama qubayska. Miyaad rabtaa inaad ku qaadato xisbiyada bachelorette leh faa'iido iyo farxad? Ku dar booqashooyinka xarumahan kuwaas oo liiska kiisaska muhiimka ah ee diyaarinta arooska . Ururinta fasaxa noocan oo kale ah "water" waxaa ka mid ah safka hore ee sauna leh hudheel ballaaran iyo "sifooyin" kale - qubeyska qoryaha, koofiyadaha oo idil, tuwaalo qurux badan, khafiifiye la tuuro. Waa inaad si taxadar leh u eegtaa miiska xafladaha - cuntooyinka cagaaran ee hilibka badda, hilibka dufanka yar iyo kalluunka, iyo sidoo kale khudradda, miraha, casiirka, biyaha macdanta ah, cocktailska yar, shaah cagaaran ayaa ugu fiican. Maxaad u malayn kartaa madadaalada xaflad bachelorette ee sauna? Shaki la'aan, marti-geliyeyaal qurux badan oo loo yaqaan 'bathing the bathhouse' iyo masseurs ayaa fasax siin doona "xusuus-qor". Si kastaba ha ahaatee, dhacdo aan "waxyeello lahayn" ayaa noqon doona tartan, ficil-sheegid ama heesaha karaoke.
Haddii cimilada xagaaga diiran tahay dibedda, waxaad dooran kartaa beerta cagaaran, keynta ugu dhow ama bangiga woqooyiga sida booska xisbigu. Maxaa ka fiicnaan kara cunto dabiiciga ah? Intaa waxaa dheer, haddii uu jiro wabiga ama wabiga ku dhow, waxaad qabanqaabin kartaa doonnida doonnida, nasiibka kuugu sheegaya ubaxyada. Iyo sida ay u fiicantahay dabka dabka fiidkii! Xaaladda bachelorette ee nooceeda ah ee arooska iyo martida ayaa la xusuusan doonaa muddo dheer.
Cuntada, bar, naadiga habeenkii
Fikradda ugu caansan ee xisbiyada bachelorette - iyo sidoo kale, si kastaba ha ahaatee, ugu qaalisan. Gaar ahaan haddii dabbaaldegga la qorsheeyay makhaayad qaali ah ama goob lagu caweeyo. Dhamaan xafladaha makhaayadda ama makhaayadda waxaad ka dalban kartaa suxuunta aad jeceshahay oo aad ku raaxaysato bulshada dhexdeeda, iyo kooxda - qoob-ka-ciyaarka ama heesta karaoke. Waxa ugu muhiimsan waa niyadda farxad!
Ciyaaraha xafladaha bachelorette
Sidee loo sameeyaa si dhaleeceynta gabadhiisa loo xasuusto muddo dheer? Dabcan miiska xafladaha iyo daaweynta waa mid aad muhiim u ah. Si kastaba ha noqotee, jawi xiiso leh oo nasasho leh ayaa sidoo kale "laga sameeyay" xafladaha kala duwan iyo cayaaraha kuwaas oo ku dheelitiraya dareenkooda wanaagsan ee aroosadda iyo asxaabteeda. Aynu ogaano nooca cayaaraha iyo tartamayaashu inay soo celin doonaan xafladaada xisbiggaaga munaasabad khasaare ah.
Tani waa tartan caadi ah, taas oo aad u baahan tahay inaad ku qorto madadaalo iyo joornaal ah oo aad u gelisid bac garasho. Hadda qof walba oo lugta ku leh ciyaarta si toos ah ayuu ujiraa jaceylkiisa wuxuuna fuliyaa hawshiisa. Iyo walxaha qandaraasku waxay ku xiran tahay fikradda ah qabanqaabiyaha tartanka.
Farxis, magaca gabdhaha!
Kulankan oo ku saabsan xisbigu waa nooc ka mid ah rinjiga xafladaha aroosadda oo uu la socdo magaciisa "old". Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay kubbada helium ah, oo aroosku qoro magaca gabadha oo leh calaamad, ka dibna sii deynaya samada. Dhammaan - kubbadu way carartay! Dabadeed, gabadha saaxiibka ah waxaa lagu soo bandhigaa calaamad ka mid ah calaamad ama warqad leh magaceeda cusub "is guursanaya".
Sidaa daraadeed, waxaan diyaarinno dhalooyinka leh dhir kala duwan, warqadaha iyo qalimaan. Dhar kasta waa in la tiriyaa. Nuxurta tartanka waa in la go'aamiyo magaca bahaliga ee urta oo ku qor natiijada waraaqda. Guulaystuhu wuxuu noqon doonaa gabadha leh jawaabaha ugu saxsan.
Si aad u fuliso tartankan, dhowr (oo ah marka la eego tirada ka qaybgalayaasha), siddooyinkana laga sameeyay dharka caadiga ah, ayaa loo baahan doonaa. Dhexdhexaadiyaha giraan walba wuxuu qiyaas ahaan yahay 30 cm, Hogaamiyaha wuxuu siiyaa kaqeybgalayaasha sida waafaqsan qaybta cufka, kuwaas oo gabdhaha ay xiran yihiin wareega dhexda. Markaa, muusikada qunyar-socodka ah, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto qaybta cirib-yar, oo u baahan in si fiican loo sameeyo iyo si quruxsan. Ugu danbeyn, guusha ayaa la go'aamiyaa.
Xisbiga Bachelorette ee qaabka
Xisbiyada tartan aan tooska ahayn ee tartanka ah - waa "isbeddel cusub". Sida caadiga ah, fikradda munaasabaddan oo kale ah ayaa si taxadar leh looga fekeraa, dhacdo ayaa la sameeyaa, kharashka loogu talagalay ka-qaybgalayaashu waa diyaar. Haddaba, dooran mawduuca asalka ah ee xisbiyada bachelorette.
Miyuu jiraa wadadii loo maro xisbigii hen ee xeebta Pacific ee Hawaii? Xaaladdan oo kale, waxaad "diyaarin kartaa" xaflad ku taala Hawaiian oo ku taal xeebta webiga ama wabiga. Hase yeeshee, suunka guriga, aroosadda iyo asxaabteeda ayaa "ku shubi doona" ciidamo caan ah oo loo yaqaan 'Polynesians'. Diyaarso foornada ugu quruxda badan, dhirbaaxada ka samaysan dharka fudud, midabyada midabada leh, jilbadaha, sameyska ubaxyada iyo maqaarka ubaxa. Si aad u qabatid qaybta bachelorette ee asalka ah waa in ay soo qaadaan heesaha "Hawaiian" - iyo habeenkii qoob-ka-ciyaarka kuleylka ah ayaa la hubiyaa!
Haweenayda Bariga Quduuska ah waxay mar walba qarsoodi aheyd nin. Qolka hudheelka ah ee orodka arooska waxaa lagu qabanqaabin karaa darbiyo laga sameeyay dhar cad iyo maryaha, barkadaha ku kala firirsan dabaqa, shamacyada dabka leh iyo taarikada leh miro iyo nacnac. Cimilada Bariga waxay ku xiran tahay maadooyinka aan caadiga ahayn - mawduucyada lagu qurxiyo boodhadhka iyo balaastigga, bareega, jijimooyinka. Cabbirka barnaamijka waa qoob ka ciyaarka caloosha oo ay sameeyaan quruxda quruxda badan.
Xisbiga bachelorette ee qaabka Coco Chanel
Dharka yar oo madow, dhejis duug ah, qaab qurxiyo, dahabka dahabka - iyo sawirka Mademoiselle waa diyaar! Ha ilaawin inaad ku darto waxoogaa "Chanel # 5". In qaabka madadaalada, waxaad qaban kartaa tartan loogu talagalay kuwa ugu xiisaha badan, iyo sidoo kale dooran daawashada filinka Faransiis. Iyo, dabcan, waxaan qurxinaa qolka leh sawirro leh sawirka Eiffel Tower iyo indhaha kale ee Parisian.
Guurku waa dhacdo muhiim ah oo ku saabsan qof kasta
Qurxinta quruxda leh ee quruxda badan
Sida loo diyaariyo arooska
Sida loo doorto maalinta arooska ee 2015
Guurka labaad waa guusha rajada laga qabo khibrada nolosha
Salad leh sausage, jiis iyo yaanyada
Hilibka hilibka ee aerogril
Sidee loo noqon karaa "eedo"?
Cuntada ugu fiican ee caloosha
Siyaabaha lagu kalsoonaado
Diidmada, midkee mid u doorto jawaab celinta dhibta?
Muxuu madaxa u dhaawacmay?
Alaabooyinka aadan ka helin dufanka
Digaag suugo soy ah
Cuntada saxda ah ee galmada weyn
Vera Brezhnev ayaa ka xanaajisay wararka xanta ah ee furitaanka ka yimid Konstantin Meladze
Uruurinta dahabka laga soo iibsaday Tiffany & Co iyo Dover Street Market
Miisaanka, dhererka iyo waxqabadka ilmaha
Nolosha shakhsiga ah ee Ekaterina Andreeva
Caqabadaha aan la dabooli karin: shiseido
Nasharaadka, koofiyadaha iyo khaanadaha: waxa loo dooranayo
Marka aad raadineyso jilaani fiican: sida loo doorto jilicsanaanta dumarka saxda ah